FBS - အဆက်မပြတ် တိုးတက်နေတဲ့ broker. လက်တွဲညီညီရှေ့့သို့ချီ!
စတင် အခြေချ ဆောင်ရွက်!
၂၀၀၉ ခုနှစ်ဟာ FBS ရဲ့နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ အမှတ်သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေနပ်ဖွယ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဖောက်သည်တွေရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ဆန်းစစ်ချက်များက ကျွန်ုပ်တို့ကို ယုံကြည်မှုလျှင်မြန်စွာရရှိစေပြီး ကမ္ဘာတစ်လွှားက အရောင်းအဝယ်သမားတွေရဲ့ အလေးပေးမှုကိုခံရပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အကောင်းဆုံးသော လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်များက ကုမ္ပဏီ၏ကျော်ကြားမှုကို ထပ်ခါထပ်ခါတိုးတက်စေပြီး FBS ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် ပထမဆုံးနှစ်မကုန်ခင်မှာပင်လျှင် ဖောက်သည် ၅၀ ၀၀၀ ကျော်သို့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်ထဲမှာပဲ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပူးပေါင်းလက်တွဲသူများကွန်ရက်ကိုလည်း နိုင်ငံပေါင်းများစွာတွင် စတင်တည်ထောင်နိုင်ပြီး နိုင်ငံတကာဖောက်သည်အကူအညီပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။
FBS သည်၎င်း၏ ပထမဆုံးဂုဏ်သိက္ခာရှိသောဆု -“အကောင်းဆုံးအသေးစား Forex-broker” ဆုရရှိခဲ့သည်။ ကျွမ်းကျင်သူများယုံကြည်မှုဟာ ကုမ္ပဏီရဲ့အကောင်းဆုံးသက်သေဖြစ်သလို မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်သည်။
FBS ဟာ၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုကို ဆက်လက်တိုးတင်အောင်ဆောင်ရွက်နေပြီး နှစ်မကုန်ခင်ကုမ္ပဏီ၏ဖောက်သည်ထက်ဝက်ခန့် တိုးပွားလာခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ပြိုင်ပွဲပေါင်းများစွာစတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး ကိုယ်ပိုင်ဆန်းစစ်ချက်အရင်းအမြစ်များတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
FBS သည် “အကောင်းဆုံးအသေးစား Forex Broker” ဆိုကို ဆက်တိုက်ရရှိခဲ့သည်။ သို့သော် ယခုအချိန်သည်ကမ္ဘလုံးဆိုင်ရာအတိုင်းအတာထိသွားရန် အချိန်ကျရောက်လာပြီဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ပြပွဲများတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်ခြင်း၊ အခမ်းအနားများကျင်းပခြင်း၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုမှုများရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ထိုနှစ်ဟာ နယ်မြေဖြန့်ကျက်တဲ့နှစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ စုစုပေါင်းဖောက်သည်အရည်အတွက် ၁၀၀ ၀၀၀ ထက်ကျော်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ FBS သည်နွေးထွေးတဲ့တုန့်ပြန်မှုများနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပူးပေါင်းလက်တွဲသူများ စဉ်ဆက်မပြတ်ရရှိလာခဲ့သည်။
FBS ရဲ့သြဇာရှိတဲ့ဆုတွေစာရင်းမှာဆု ၃ ခုတစ်ဆက်တည်းထပ်ဖြည့်ရပါလိမ့်မယ် - “အာရှအလျှင်အမြန်တိုးတက်လာသော broker” “အာရှအကောင်းဆုံး Forex Broker” “အကောင်းဆုံး MetaTrader4platform”. FBS ဟာကြီးမားတဲ့အောင်ပြင်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ပြိုင်ပွဲများ၏ဆုကြေးငွေများကို အကြိမ်ကြိမ်တိုးမြှင့်ပေးခြင်း၊ ငွေကြေးများစိတ်ချရမှုရှိစေရန် သူမတူသောဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်များကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်း ဖောက်သည်များကိုဆက်လက်ပြီးအားပေးနေပါတယ်။ ပူးပေါင်းလက်တွဲသူများသည် FBS ရုံးခွဲများကို ၄င်းတို့၏နိုင်ငံများတွင် ပို၍ပို၍ဖွင့်လာကြသည်။
FBS သည်နောက်တစ်ဆင့်သို့ရောက်ရှိရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြီးပြည့်စုံသော cutting-edge နည်းပညာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုစတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်တုန့်ပြန်မှုတွင် တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး Forex ကမ္ဘာ၏အဓိကကျသော အခန်းကဏ္ဍများတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ယခုနှစ်တွင် အများဆုံးဖြစ်သော အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းခံခဲ့ရသော ဆု ၄ ခုရရှိခဲ့သည်။ “အာရှတွင်အကောင်းဆုံး broker” “အရှေ့တောင်အာရှတွင်အကောင်းဆုံး broker” “အကောင်းဆုံးပူးပေါင်းလက်တွဲမှုပရိုဂရမ်” “အကောင်းဆုံးအရောင်းအဝယ် platform”. စုစုပေါင်းအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သူအရေအတွက်ဟာ ၄၀၀ ၀၀၀ နားကပ်လာခဲ့သည်။
FBS ဟာ၎င်း၏ ငါးနှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ကို ကျင်းပခဲ့သည်။ ပွဲစဉ်ကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြီးကျယ်သောကံစမ်းမဲများမဲနှိုက်၍ ဖောက်သည်များအား မဲဖောက်ပေးခဲ့သည်။ FBS သည်များစွာသောနှုတ်ခွန်းဆက်စကားများနှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာများ ရရှိခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် “အာရှအကောင်းဆုံး broker” ၄ နှစ်ဆက်တိုက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဖောက်သည် သန်းဝက်ထက်ပိုမို၍ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်တွင် FBS Personal အကောင့်သစ်တစ်ခုကိုလည်း စတင်ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီဝက်ဘ်ဆိုဒ်လည်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
FBS သည်ကိုယ်တိုင်လုပ်ချက်များကြောင့် နိုင်ငံတကာဆု ၁၁ ခုရရှိခဲ့သည်။ နယ်ပယ်အသစ်များကို သက်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ရုံးခွဲများဖွင့်လှစ်ပြီး သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုသည် အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ကြီးထွာလာနေသည်။ ဖောက်သည်များနှင့် ပူပေါင်းလက်တွဲသူအရေအတွက်သည် ၁ သန်းကျော်လာခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏အလှည့်အပြောင်းသည် နှစ်ဆကျော်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ကြီးမာသော အလှူအတန်းလုပ်ဆောင်မှုကိုလည်းဆောင်ရွက်နေပြီး ဒေါ်လာ ၄၀၀ ၀၀၀ ကျော်လှူဒါန်းပြီးဖြစ်သည်။
FBSတွင် အော်ဒါဖွင့်ရောင်းဝယ်ခဲ့သည့် အရေအတွက် သန်း၂၀၀ကျော်ပြီဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတဝှမ်းမှ အရောင်းအဝယ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေသူပေါင်း ၂သန်းခွဲကျော်ရှိသည့် အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါသည်။ တိုးတက်မှုနှင့်အတူ ပိုမိုတိုးချဲ့ကျယ်ပြန့်လာနေပါသည် - "နေ့စဉ် နေ့တိုင်း ကုန်သည်အသစ်ပေါင်း ၇၀၀၀လာရောက်ပူးပေါင်းလျှက်ရှိပြီး၊ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ရုံးခွဲပေါင်း ၄ခုခန့် အသစ်ဖွင့်လှစ်နေရပြီး၊ နိုင်ငံတကာ ဆုတံဆိပ်ပေါင်း ၆ခုခန့်ရရှိလျှက်ရှိပါသည်။ သို့သော်လည်း FBSသည် အောင်မြင်မှုအပေါ်မှာပဲ သာယာယစ်မူးမနေဘဲ ဖောက်သည်များကို အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံးသော ဝန်ဆောင်မှုများ ပရိုမိုးရှင်းများကို ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေလျှက်ရှိပါသည်။ အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဝန်ဆောင်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။!
ထိုနှစ်သည် FBSအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်ခဲ့သည့် မမေ့နိုင်ဖွယ် နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်. အခွင့်အရေးသစ်များ အသစ်အဆန်းများကို အသုံးချခွင့်ရရှိခဲ့သည့်နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပါသည်. ၂၀၁၇ နှစ်အစ ဇန်န၀ါရီလတွင် ဖောက်သည် ၃သန်းရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၁၇နှစ်ကုန် ဒီဇင်ဘာတွင် ဖောက်သည် ၆ သန်းကျော်အထိရှိလာခဲ့ပါသည်. သို့ဖြစ်ရာ ကျွန်ုပ်တို့၏ နိုင်ငံတကာတွင်အောင်မြင်နေသည့် အကျိုးဆောင်မိသားစုသို့ ပျမ်းမျှ တစ်ရက်လျှင် ဖောက်သည်အသစ် ၈ထောင်အထိ ပူးပေါင်းပါဝင်လာခဲ့သည်ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်.
၂၀၁၇ခုနှစ်အတွင်း အောက်ပါဆုတံဆိပ်များကို ရရှိခဲ့ပါသည်: "၂၀၁၇အတွက် အရှေ့တောင်အာရှ အကောင်းဆုံး Forex အကျိုးဆောင်ဆု", "အင်ဒိုနီးရှား အကောင်းဆုံး ငွေကြေးဈေးကွက် အကျိုးဆောင်ဆု", “အကောင်းဆုံး FX IBအစီအစဉ်ဆု”, "ထိုင်းနိုင်ငံ အကောင်းဆုံး Forexအကျိုးဆောင်ဆု ၂၀၁၇".
ဖောက်သည်များနှင့်လဲ အတတ်နိင်ဆုံး နီးနီးကပ်ကပ်ရင်းနှီးမှုရရှိစေရန် အတတ်နိင်ဆုံးဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်. ယခုနှစ်အတွင်း ထိုင်း၊ တူရကီ၊ လာအိုနှင့် ရှန်ဟိုင်းတို့တွင် ဒေသတွင်း ရုံးခွဲသစ်များကို ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်. ထိုရုံးခွဲများတွင် ပညာပေးသင်ကြားရေးသင်တန်းအစီအစဉ်များ၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ များစွာကို စီစဉ်ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်.
အချိန်က ရပ်နားမနေဘဲ အမြဲပြောင်းလဲနေသည့်အတွက် ခေတ်နှင့်အညီဖြစ်အောင် အမြဲကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်. ယခုနှစ်အတွင်း ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေျးားခေတ်စားလာခဲ့သည့်အတွက် ဖောက်သည်များ အဆင်ပြေစွာရောင်းဝယ်နိုင်စေရန်အတွက် ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေး ၄မျိုးဖြစ်သည့်: ဘစ်ကွိုင်၊ Litecoin, Dash, နှင့် Ethereum များကို ထပ်မံဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်. ထို့ပြင် နောက်လာမည့်နှစ်များတွင်ပါ ၀န်ဆောင်မှုအရည်အသွေး တိုးတက်သထက် တိုးတက်လာစေရန်အတွက် အကောင်းဆုံးကြိုးစားဆောင်ရွက်လျှက်၇ှိနေပါသည်.
ကျွန်ုပ်တို့သည် နောထပ် အောင်မြင်မှုမှတ်တိုင်သစ်များ စိုက်ထူနိုင်ရန်အတွက် အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ, မိတ်ဆွေတို့ရော?